Asabotsy, Aogositra 1, 2020 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Douglas Karr
Ireo mpampiasa rindranasa finday dia matetika mirotsaka an-tsehatra, mamaky lahatsoratra marobe, mihaino podcast, mijery horonan-tsary ary mifanerasera amin'ny mpampiasa hafa. Tsy mora ny mampivelatra traikefa amin'ny finday izay mandeha! Lisitra fizahana 10-dingana hananganana sy fivarotana fampiharana mahomby amin'ny antsipiriany momba ny làlan'ny hetsika ilaina - dingana-tsikelikely manomboka amin'ny foto-kevitry ny fampiharana hanombohana - hanampiana ireo fampiharana hahatratra ny fahafaha-manao azy tanteraka. Miasa ho maodely fandraharahana ho an'ny mpamorona sy fanantenana feno famoronana, voaforona ny sary
Nomery: Dashboard Widget mitambatra ho an'ny iOS
Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Ny numerics dia mamela ny mpampiasa iPhone sy iPad hamorona sy handanjalanja ny dashboard misy azy manokana avy amin'ny fanangonana antokon'ny antoko fahatelo izay mihamitombo. Misafidiana amina widgets efa nomanina an-jatony hananganana topy maso ny famakafakana tranonkala, fidirana amin'ny media sosialy, fandrosoan'ny tetikasa, fantsom-pivarotana, filaharana fanohanana ny mpanjifa, fifandanjana kaonty na isa aza avy amin'ireo takelakao ao anaty rahona. Misy ny endri-javatra: Widget namboarina tamin'ny karazana isan-karazany, anisan'izany ireo isa lava, kisary tsipika, tabilao mie, lisitra fantsom-pohy ary bebe kokoa Mamorona marobe
Talata, Janoary 7, 2014 Talata, Janoary 7, 2014 Douglas Karr
appFigures dia sehatra fanaovana tatitra mora vidy ho an'ireo mpamorona fampiharana finday izay mampivondrona ny varotra fivarotana fampiharana anao, angona doka, tsikera manerantany ary fanavaozana ny laharana isan'ora. appFigures dia manangona sy maka sary an-tsaina ny isa momba ny varotra sy fisintomana, ny valiny manerantany ary ny laharana ary ny angona hafa momba ny vahaolana fitaterany. endri-javatra appFigures: Rohy fivarotana maro - manara-maso sy mampitaha ny fampiharana iOS, Mac, ary Android amin'ny toerana iray. Daily Email Reports - misy tarehimarika lehibe, ao anatin'izany ny angon-drakitra, ny fampidinana, ny doka